ရင်လေးစရာ အမွေတွေကိုု ဘာလုုပ်သင့်သလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရင်လေးစရာ အမွေတွေကိုု ဘာလုုပ်သင့်သလဲ
ရင်လေးစရာ အမွေတွေကိုု ဘာလုုပ်သင့်သလဲ
Posted by သၾကားလုုံးေၾကာ္ on Jul 4, 2012 in Copy/Paste | 41 comments
ခရီးသြားဓာတ္ပံုု ပုုဂံသိုု ့အလည္တစ္ေခါက္ သၾကားလံုုးေၾကာ္ အရသာ
တစ်သက်လုုံးမှာ ပုုဂံကိုုနှစ်ခါပဲရောက်ဖူးပါတယ်။ ခပ်ငယ်ငယ်အရွယ်က ပထမဆုုံးအကြိမ် ရောက်တုုန်းက အရမ်း ဂုုဏ်ယုူ သဘောကျပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ နှစ်တော်တော်ကြာပြီး မနှစ်ကဒုုတိယအကြိမ် ရောက်တော့ အတော်စိတ်ပျက်ပြီး ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။ စိတ်ထဲကမှတ်မိတဲ့ ပုုဂံနဲ့လဲ မတူပါလား။ ၁၅ နှစ်အတွင်း ပုုဂံကပဲပြောင်းလဲသွားလိုု့လား ကိုုယ်ပဲပြောင်းသွားလိုု့လား။ အဖြေရှာမရတဲ့ စဉ်းစားစရာ တချို့ ကိုု ရွာကလူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးရအောင်လိုု့ ဒီပိုု့စ်လေးကိုုဖတ်ပြီး ဆွေးနွေးပေး ကြပါ။
လေယျာဉ်ပျံကြီး နဲ့ ပုုဂံကိုု လည်လည်သွားရအောင်
ငယ်ငယ်ကလှည်းစီးပြီး သွားခဲ့ဖူးတဲ့ “လှည်းဝင်ရိုုးသံတညံညံပုုဂံဘုုရားပေါင်း” ကအခုုတော့ Tour bus တွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ “ကားဝင်ရိုုးသံတညံညံပုုဂံဘုုရားပေါင်း” ဖြစ်နေပါပြီ။ ကျွန်မတိုု့ မမွေးခင် ဟိုုးအရင်ကတည်းက tourists တွေရှိတာမလွဲပါ။ Tour bus တွေဒီလောက်မများလိုု့လား ကလေးမိုု့ သတိမထားမိတာလားမပြောတတ်ပါ။ ဂျူးရဲ့ “မြစ်တိုု့၏မာယာ” ထဲကလိုုစက်ဘီးနဲ့ သွားတဲ့ tourist တစ်ယောက်မှမတွေ့ခဲ့တဲ့အပြင် စာအုုပ်ထဲကလိုု သေချာအလေးအနက်ထားပြီးလေ့လာတဲ့ tourist ထက် ၊ အပျော်လည်တဲ့ မြင်ဘူးရုုံ ရောက်ဖူးရုုံ အဖြစ်လာကြတဲ့ sight-seeing tourist တွေပဲ ခပ်များများ တွေ ့ခဲ့လိုု့ ၊ ပုုဂံကိုု ကျွန်မတိုု့လိုု အလေးအနက် မထားရကောင်းလားဆိုုပြီး ဒေါမနသ ဖြစ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ (ကျွန်မသာ စိတ်တိုုင်းကျ tour guide လုုပ်လိုု့ကတော့ ကျွန်မရဲ့ tourist တွေကိုု စာစစ်သလိုု မေးပြီး မဖြေနိုုင်တဲ့ သူတွေကိုု ထားရစ်ခဲ့ပြစ်မယ်)
ပုုဂံမှာ အရင်ဆုုံးရောက်တာက ရွှေစည်းခုုံ ဘုုရားပါ။ ထင်သလောက် စိတ်ဝင်စားစရာ မရှိတာနဲ့ မြန်မြန် ပြန်ထွက်ခဲ့ ကြတယ်။ (ကြုံလိုု့ … အမေရိကား Texas က Austin မှာ သီတဂူဆရာတော် တည်ထားတဲ့ စေတီတော်က ရွှေစည်းခုုံ နဲ့ ချွပ်ဆွပ်လိုု့ ပြောပါတယ်။ သူများ Facebook ကပုုံကိုု မခိုုးချင်လိုု့ ဒီမှာ မတင်ပေးလိုုက်ပါ။ )
ဂူပြောက်ကြီးရောက်တော့ နံရေးဆေးရေးပန်းချီတွေကိုု အရင်တုုန်းက ဂျာမန်လုူမျိုးတစ်ယောက်က မြန်မာလုူမျိုးတွေအထိန်းအသိမ်း မတတ်ပဲ ကွယ်ပျောက်သွားမှာစိုုးလိုု့ ဆိုုပြီး ခွာသွားပြီး အခုု ဂျာမနီက ပြတိုုက် မှာရောက်နေကြောင်း ၊လူတွေခိုုးတာကနေ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း ဖိုု့ လိုုတဲ့ အကြောင်းပြောနေတဲ့ Tour guide ကိုုကြုံလိုု့ မေးကြည့်မိတယ်။
“ပုုဂံက UNESCO world heritage sites ထဲ မှာပါလားဟင်”
Guide : “မပါသေးဘူး ညီမ”
ဪဪ UNESCO ကလူတွေအလုုပ်များနေလိုု့ ပုုဂံကတန်းစီနေရတယ်ထင်ပါ့။ ဒါနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ပုုဂံဘယ်လောက်စောင့်ရမလဲသိချင်တာနဲ့ အင်တာနက်ပေါ်ခေါက်လိုုက်တယ်။ လားလား…….. UNESCO မှာမပါသေးတာဘယ်ဟုုတ်မလဲ။ အရည်အချင်းမမှီလိုု့တဲ့ UN အဖွဲ့အစည်းက ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမဲ့ ကမ္ဘာ့ အမွေအနှစ် နေရာ World Heritage site အဖြစ် မသတ်မှတ်ပါတဲ့။ ကျွန်မခေါင်းစားသွားပါတယ်။ ပုုဂံလောက်တောင် မဟောင်းတဲ့ မကောင်းတဲ့ နေရာတွေတောင်အသိအမှတ်ပြု ထောက်ပံ့ထိန်းသိမ်း ထားတာပဲ။ အသိအမှတ်ပြုပြီးသား ၉ ၃၆ နေရာ ဒီလောက်အများကြီး ထဲမှာ နှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ စေတီပုုထိုုးပေါင်း ထောင်ကျော်တစ်နေရာထဲမှာစုုစုုဝေးဝေး ရှိနေတဲ့ ပုုဂံဘာလိုု့ qualify မဖြစ်တာလဲ။
နောက်ဆုုံးဖတ်ရတာကတော့ ရှေးဟောင်းလက်ရာတွေကိုု ရှေးဟောင်းလက်ရာနဲ့ မတူအောင် ပြုပြင်ထားလိုု့ပါတဲ့။ ….
ဘယ်သူ ့ကိုု စိတ်ဆိုုးအပြစ်တင်ရမှန်းတောင်မသိဖြစ်သွားတယ်။
အဲဒီတော့မှ ပုုဂံကိုုဒီတစ်ခေါက်သွားတာ ဘာစိတ်တိုုင်းမကျခဲ့သလဲဆိုုတာ လက်ထောက်မိတော့တယ်။ ပုုဂံက နာမည်ကြီးဘုုရားတွေအကုုန်လုုံးဟာ အနည်းနဲ့အများ ပြင်ဆင်ထားတာချည်းပါပဲ။ တချို့ ဆိုု ပုုဂံခေတ်ကဘုုရားလိုု့ တောင်မထင်ရပဲ ရန်ကုုန်ကဘုုရားတွေထဲကတစ်ဆူဆူနဲ့ ပိုုဆင်သလိုုလိုု။ ဥပမာ ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ ရွှေစည်းခုုံ ဘုုရား ဟာ ပုုဂံခေတ်ရဲ့ သင်္ဂေတ အနီရောင်အုုတ်ဘုုရားတွေနဲ့ အံမဝင်ပါ။ ရွှေစည်းခုုံ သွားအပြီး ပုုဂံပိုုဆန်တဲ့ဘုုရားတွေပဲသွားဖိုု့ လောလောလတ်လတ် ထီးတော်အသစ်တင်ထားတယ် ဆိုုတဲ့ အလိုုတော်ပြည့် ဘုုရားကို အစီအစဉ်ထဲကဖျက်လိုုက်ဖြစ်တာမှတ်မိသေးတယ်။ သဗ္ဗေညု ဘုုရားကအဖြူရောင် ဖြစ်ပြီး အာနန္ဒာ ထီးတော်/ငှက်ပျောဖူး ဝါနေတာလည်း ပုုဂံနဲ့ မလိုုက်ပါ။ ကျွန်မအကြိူက်ဆုုံး ဓမ္မရံ ကြီး ဘုုရားကတော့ ပုုဂံမူမပြောက်သေးလိုု့ စိတ်တိုုင်းကျခဲ့ပါရဲ့။
ဒုုမှာ ဓမ္မရံ ဆိုုတဲ့ ဓမ္မရံ ကြီးဘုုရား
UNESCO မှာပါတာမပါတာထားပါ။ ကျွန်မ လက်လှမ်းမမှီပါ။
ဘုုရားတွေကိုု ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအကြောင်း ဆွေးနွေးချင်တာပါ။ ဒါကတော့လူတော်တော်များများနဲ့အမြင်ကွဲမလားမသိ။ ဗုုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ ဘုုရားပျက်ကိုု ဒီတိုုင်းထိုုင်ကြည့်မနေ နိုုင် တာ နားလည်ပါတယ်။ မပြင်လို့ထီးတော်မရှိ၊ အုုတ်တွေကြွေပြီး အားလုုံးမြေကြီး ဖြစ်သွားတဲ့ထိစောင့်ကြည့်ရမယ်လိုု့ မဆိုုလိုုပါ။ မြန်မာနိုုင်ငံမှာ သာသနာ မကွယ်တာ ရှေးဟောင်းဘုုရားတွေကိုု အစဉ်အဆက် ထိန်းသိမ်းထားလိုု့ဆိုုတာ သံသယမရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်ပြောင်းသွားအောင်ပြင်ဖိုု့ လိုုလိုု့လား။ ပုုဂံခေတ်ကလက်ရာတွေနဲ့ တူအောင်မွမ်းမံလိုု့ မရဘူးလား။ ရွှေရောင်သုုတ်မဲ့အစား အုုတ်နီခဲရောင် အတိုုင်း ထားလိုု့မရဘူးလား။ ပုုဂံက ဂေါက်ကွင်းအကြောင်းတော့ ထည့်တောင်မပြောတော့ပါဘူး။ မတူးရသေးတဲ့ ဘုုရားတွေ ပေါ်မှာများလားမသိ။
ထီးလိုုမင်းလိုု ဘုုရားထဲမှ နံရံဆေးရေး ပန်းချီများ
ဘုုရားတည် ကျောင်းဆောက်တာ နတ်ပြည်ရောက်မယ့် ကောင်းမှူကုုသိုုလ် ဆိုုပေမဲ့ စဉ်းစားစရာပဲ။ အန်ကောဝတ် လိုုသစ်ပင်တွေပေါက် ရေညှိတွေ တက်နေပေမဲ့ အရင်လက်ရာတွေ အတိုုင်းပဲ ထားတာကောင်းလား ၊ အရင်က ပုုဂံ ပုုံပြောက်ပြီးခေတ်သစ် ပုုဂံ ပုုံနဲ့ ရေရှည် ပိုုခံတဲ့ ဘုုရားတွေကပိုုကောင်းလား မစဉ်းစားတတ်တော့ပါ။ ဝေဖန်ရေးလေကန်ရေး လုုပ်နေပေမယ့် တကယ် လက်ရာမပြောက်အောင်ဘယ်လိုုပြင်မလဲဆိုုရင် ဆောက်လုုပ်ရေး ရော ဗိသုုကာရော နည်းနည်းမှမသိတဲ့ ကျွန်မလည်းမပြောတတ်ပါ။
ရှေးဟောင်းသုုတေသန နဲ့ နီးစပ်တဲ့ လုူတွေဆီက ဘယ်လိုုသဘောထားလဲသိချင်မိတယ်။ ဗုုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေအမြင် ဘက်ကလည်းသိချင်ပါတယ်။ ပြင်သင့်သလား ၊ မပြင်သင့်ဘူးလား ၊ ဘယ်လိုုပြင်သင့်တယ်ထင်ပါသလဲ။
ပုုဂံမှာ ၁ ရက်လည်ပြီးတဲ့ နိုုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ရဲ့ Comment က “Cambodia က အန်ကောဝတ် ရဲ့ signature က အဖြူရောင်ကျောက်တုုံး တွေ ၊ ပုုဂံ ရဲ့ signature က အနီရောင်အုုပ်ချပ် တွေပဲ” တဲ့။
နောက် ၁၅ နှစ်ဆိုုရင်ပုုဂံက ဘုုရားတွေအကုုန် ရွှေရောင်တဝင်းဝင်းဖြစ်သွားပြီး ပုုဂံနဲ့ မတူတော့ဘဲ ရန်ကုုန်နဲ့တူသွားမလား စိုုးရိမ်မိပါတယ်။
p.s: အချက်အလက်များ မှားနေရင်ပြင်ပေးကြပါ။
ပထမဆုုံး ပိုု့စ်မိုု့ ညှာတာကြပါနော် :-) အရေခွံထုူအောင်ကြိုးစားထားပေမဲ့ ရွာသက်တမ်းနုုသေးတော့ ဒီလောက်မထူသေးပါ။
အတွေးအခေါ်နှင့် အရေးအသားကတော့ ရှယ်ပဲ ။
ရှေးဟောင်းလက်ရာတွေကိုု ရှေးဟောင်းလက်ရာနဲ့ မတူအောင် ပြုပြင်ထားလိုု့ပါတဲ့။
ဘယ်သူ ့ကိုု စိတ်ဆိုုးအပြစ်တင်ရမှန်းတောင်မသိဖြစ်သွားတယ် “
နေထွက်ကာစ လား ..နေဝင်ကာနီးလား မပြောတတ်ပေမယ့်…
နည်းနည်းလေး စော/ နောက်ကျ သလို ခံစားရတယ်…
တကယ့် ခွစ်တစ်ကယ် ဘီးဇီးအာဝါ မှာ ရိုက်ထားတဲ့
ပုဂံကို ဒါ့ပုံမရိုက်ဖူးသေးတာ …(ဆော့သန်းင် လိုက် မရိုက်ဖူးတာထက်ကို)
အကြီးကြီး ပိုတဲ့ … စိတ်ထိခိယက်မှုပါပဲဗျာ..
မှန်ပါ့ ဆရာသမားရယ်။ နေထွက်ရိုုက်ရလောက်အောင် လုုံ့လဝီရိယ မရှိတော့ နေဝင်ပေါ့။ ဒါတောင် အချိန်ကောင်းမှာ ပုုံကောင်းကောင်း စိတ်ကြိုက်မရလိုုက်ပါ။ လုုံလဝီရိယ အလွန်နည်းပါသေးသည်။
Italy က Venice ကမကြာခင်ရေမြုပ်တော့မှာမိုုလိုု့ မမြုပ်ခင် သွားကြရတယ်တဲ့။ ပုုဂံ လည်း နောင်ရှေ့ရေးမသေချာတာကြောင့် အမြန်ဆုုံးသွားသင့်ပါကြောင်း ။
လက်တလောတော့ သွားဖို့ အစီအစဉ် မရှိသေးပါကြောင်းနဲ့
အဲ့မှာတော့ အဲ့ဒါဂျီး ရှိတာပဲ ..ပုဂံမှာတော့ ဘာ ရှိမလဲ မသိ…
ဇဂါးမစပ် ..ပုဂံ အကြောင်း ပိုသိချင်ရင် ပုဂံ ကို မီးပုံးပျံစီးပြီး ရိုက်ခဲ့တဲ့ သထိန်းကြီး ၁ယောက် ရွာထဲမှာ
ရှိတယ်ဗျ သူ့မေးရင် ပိုနှံ့နှံ့စပ်စပ် သိရမယ် ဗျို့ ..လက်တို့ခဲ့ပါရဲ့
အဲဒါ မျောက်ဝင်ဆော့သလို ဖြစ်သွားတာ
မန္တလေး တို့ ရန်ကုန် တို့
ဦးဦးပါလေရာအတွက်အနာဟောင်းပေမဲ့ အခုုမှသိတဲ့ ကျွန်မ အတွက်တော့ အနာအသစ်ပါပဲ။
အနာမှန်းမသိသေးတဲ့သူတွေကိုု သိစေ သတိထားစေချင်လိုု့ပါ။ လက်တစ်လက်တည်းနဲ့ ပုုဂံတည်လိုု့မရသလိုု တစ်လက်တည်း နဲ့လည်းဖျက်လိုု့မရပါ။
သကြားလုံးကြော် ရဲ့ စေတနာနဲ့ ရှေးဟောင်းအမွေတွေအပေါ် သုံးသပ်ပြထားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ယတြာတွေ ဓါတ်သဘောတွေ နဲ့တိုက်တဲ့အခါ ဘုရားစေတီတွေလဲ ရုပ်သေးရုပ်သာသာပါဘဲ။
ပုဂံဘုရားစေတီ အဟောင်းအပျက်တွေ ပြင်ဖို့ အလှူခံတုန်းက မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ စုပြီးပြင်လိုက်မိတာကိုတောင် မှားနေပြီလားလို့ တွေးမိတယ်။
အမှန်က ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဆိုတာ အစဉ်အဆက်ထိန်းသိမ်းလာခဲ့ရမယ်ထင်ပါတယ်။
ပျက်စီးလာတာကို ဒီအတိုင်းပဲ ထားရင်လည်း မကောင်း။
ပြင်လိုက်လို့ ရှေးဟောင်းလက်ရာတွေ ပျက်စီးပျောက်ကွယ်သွားတာလည်း မကောင်း
ရှေးလက်ရာမပျက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းသား။
(အမှန်တော့လည်း ပုဂံရှေးဟောင်းဘုရားစေတီတွေ ပြုပြင်မယ် ဆိုကတည်းက ရှေးမူလက်ရာမပျက် ပြုပြင်မယ်လို့ ပြောတာပဲ။)
ဓါတ်ပုံတွေ အရမ်းလှတာပဲ …
ပုဂံကိုမြင်လိုက်တိုင်း ဘာကိုလွမ်းမှန်းမသိတဲ့ ခံစားချက်ဖြစ်ရတာကတော့ အမြဲတမ်း အတူတူပါပဲ ..
ပုဂံကို ပထမဆုံးရောက်ဖူးတုန်းက ၁၉၈၉ ခုနှစ် … အဲဒီအချိန်တုန်းက ရှေးဟောင်းလက်ရာတွေနဲ့ ရှေးဟောင်းပုဂံအရသာကို ခံစားခဲ့ရတယ် … ၂၀၀ဝ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်းကထဲက ခေတ်သစ်ပုဂံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ် …
ဒါပေမယ့် ပုဂံကတော့ ပုဂံပါပဲ ….
ပုဂံအတွက် ရတက်မအေးဖြစ်ခဲ့မိတာ ကြာပါပြီ။
ဘုရားအိုဆို ပြင်ပြီးအလှူရှင်အသစ်နာမည် ရေးထိုးချင်တာ ကုသိုလ်ချည်းပဲထင်နေရော့သလားမသိပါ။
ရှေးလက်ရာမပျက်ပေမယ့် သမိုင်းတန်ဖိုး နဲ. အနုပညာတန်ဖိုး လျော့သွားမှဖြင့်
သမိုင်းတရားခံ၊ အနုပညာတရားခံ ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလို. ထင်နေရော့သလား။
ဓါတ်ပုံတွေကတော့ ပို့စကဒ်ထုတ်လို့ ရပြီ။
ဦးခင်ညွှန့် က သူ အမှားကြီးမှား ခဲ့လို့ ရှမ်းပြည် က ကက္ကူဘုရားမှာ ဒီလိုအမှားမျိုး ထပ် မကျူးလွန်ဘူးလို့ ပြောခဲ့တယ် ဆိုတာ ဂေါပက တွေမှ တစ်ဆင့် ကြားဘူးခဲ့ပေမဲ့ ဒုံယင်းပြန်ရောက်တာပါ ။
ဦးတေဇရဲ့ မျှော်စင်ကြီးကလည်း unesco လက်မခံတဲ့ အထဲမှာ တစ်ခုပါတယ်။
နောက်လူတွေကတော့ နောက်ထပ် အမှား မကြူးလွန်လောက်တော့ဘူးလို့ မျှော်လင့်ရတာပါဘဲ ။
ဒါပေမဲ့ ပညာရှင်တစ်ယောက်က ပုဂံစိမ်းလန်းစိုပြေရေးလုပ်တာတွေ အမှားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောပြတာ မှတ်သားမိခဲ့ပါတယ် ။ ပုဂံတည်ရှိနေတာဟာ ၊ ပုဂံ ဘုရားတွေ တည်ရှိနေတာဟာ မိုးနည်းရပ်ဝန်းကြောင့် သက်တမ်းကြာရှည်ခံနေတာ တဲ့ ။ အဲ့ဒါကို စိမ်းလန်းစိုပြေရေး တွေ သစ်ပင်စိုက် ရာသီဥတုပြောင်းလို့ မိုးများ ရွာသွန်းခဲ့ပါက ပုဂံဘုရားများ မခံနိုင်ဘဲ (ပုဂံခောတ် က ဘိလပ်မြေမသုံး ထုံးသာ အဓိကသုံးထားလို့ ရေဒါဏ်မခံနိင်ဘဲ) ပုဂံဟာ ပါးစပ် ရာဇဝင်ထပ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ သတိပေးတာ နားထောင်ခဲ့ဘူးပါသည်။
ဪ ဂလိုုလား။ ဒီလိုု အသိပညာလေး ဝေမျှပေး တာကျေးဧူးပါရှင်
မနှစ်က ရောက်တုန်း အဲ့ဒီက ဂိုက်ကို နံရံဆေးရေးတွေ ဘာကြောင့်ထုံးသုတ်တာကို လက်ပိုက်ကြည့်နေတာလဲ လို့ ရန်လုပ်ဖူးတယ်။ သူကပြောတယ် အခုမှ သုတ်တာမှ မဟုတ်တာ အမရယ် အဆက်ဆက်သုတ်ခံခဲ့ရတာပါတဲ့။ နောက်သိလို့ ပြောရင်တောင် လက်ခံတဲ့သူမရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့။
ခုမှ မှားခဲ့တဲ့ အမှားတွေ မဟုတ်ပဲ အဆက်ဆက်ဖြစ်လာတာပါတဲ့။
ပုဂံကတော့ စာရင်းမဝင်နိုင်တော့ဘူး ဆိုတာကို လက်ခံထားလိုက်ပါပြီ။ ယူနက်စကို မဝင်နိုင်တဲ့ အကြောင်းကြားတိုင်း ရင်ဘတ်ထဲက အောင့်အောင့်လာတယ်။အများကြီး မှားခဲ့ကြတာကိုး။
မန္တလေးလည်း ပျက်သွားခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ နန်းတွင်း နန်းပြင် ကျုံး ဘာဆိုဘာမှ မကျန်တော့ပါဘူး။ မြို့ရိုးတခုပဲ ကျန်တော့တာပါ။
ခုနောက်မှ ဖော်တဲ့ ပျုမြို့ဟောင်းတွေ ကတော့ ပညာရှင်တွေနဲ့ တွေ့ရင် သူတို့လက်ထဲရောက်ပြီး အထိန်းသိမ်းခံရမယ်ဆိုရင်တာ့ ယူနက်စကို စာရင်းဝင်နိုင်တယ် ပြောပါတယ်။ ယူနက်စကို ဝင်နိုင်ဖို့ နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်က ပျုမြို့ဟောင်းတွေပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ဒါသည်လည်းပဲ သိပ်တော့ မသေချာ။
ပုဂံဒေသတဝိုက် စိမ်းလန်းအောင် ပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ ဦးအုန်းသာ မိုးများလာလို့ ပုဂံပျက်သွားမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းများ သိရင် ဘယ်လိုခံစားနေရမလဲ သိချင်မိတယ်။
ဆိုတော့ တူရွင်းတောင်ခြေက အပင်တွေကို ခုတ်ပြီး ဟိုတယ်ဇုန် ဖော်မဲ့ ကိစ္စကို ကြုံရင် ထောက်ခံပေးလိုက်ပါ့မယ်။
လောလောဆယ်တော့ အဲ့ဒီကိစ္စ အပယ်ခံလိုက်ရတယ် ကြားတယ် ဟုတ်လား။
အပင်တွေ ခုတ်မယ် ဆိုတာထက် ပုဂံရဲ့ အလှကို ထိ ခိုက်နိုင်တယ် ဆိုပြီး ပညာရှင် များ ထောက်ကြတယ် ဆိုတာလည်း ကြားမိတယ်။
တခြားနေရာ လွတ်မဲ့နေရာ တွေဆိုရင်ရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား ။
ပလန် အေ နဲ့ မရရင် ပလန် ဘီ နဲ့ ထပ်တောင်းကြပေါ့။ ဒီလို ပညာရှင်များ ပြောသွားတာကိုလည်း ဟိုင်းလိုက်လုပ်ပြီး ထောက်ပြရင် တမျိုး တဖုံဖြစ်လာမလားပဲ။ ဒီမိုးများလာတာကိုလည်း အခုမှ ရင်တောင် ခုန်သွားတယ်။
မတော်လို့များ တကယ်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော် …… ဘုရား ဘုရား
အင်း … အယုဒ်ဓယကို ထိုင်းတွေ ဘယ်လို ထားခဲ့သလဲ တချက်လောက် ပြန်မွှေအုန်းမှပဲ။ မနှစ်က သူတို့ဆီလည်း ရေတွေ ကြီးတာ အဲ့ဒီက ဘုရားတွေတောင် မြှုပ်ကုန်လို့ အော်နေတာတွေ့တာပဲ။
မမမယ်ပုု ရေ အယုုဒ္ဓယက ရေမကြီးခင်ကတည်းက ပုုဂံနဲ့ယှဉ်ရင် ဘာမှသိပ်မကျန်ပါဘူး။ ဒီပိုု့စ်ပြီးရင် ထိုုင်းက အယုုဒ္ဓယ နဲ့ ချင်းမိုုင်က ရှေးဟောင်းအကျန် ဓာတ်ပုုံတွေ တင်မလားစိတ်ကူးထားတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပုဂံမြို့မှာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာနေခဲ့ပါတယ်
လက်ရှိလည်း မိသားစုပိုင်အိမ်ရှိလို့ တစ်နှစ်တစ်ခေါက်လောက်ရောက်ပါတယ်
ရှေးမူအတိုင်း ပြုပြင်လို့မရမှ ပုံစံတူပြုပြင်ပါတယ်(ဥပမာ-အလိုတော်ပြည့်)
ရှေးအခါက အဆောက်အဦးကို တစေး၊ သရွတ်တို့နဲ့တည်ဆောက်တာပါ
ယခုခေတ်မှာမရနိုင်တော့ပါ၊ အင်ဂတေ(Concrete)ပဲ ရှိတာပါ၊ ရှေးတုန်းကလိုဘယ်ဖြစ်မလဲ
ရွှေစည်းခုံဘုရားရောအရင်ကတည်းက ရွှေချထားမထား ပြန်လေ့လာကြည့်ပါဦး
ဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်က ရွှေချခဲ့တာလည်း၊ ဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်ကို ရှေးကျတယ်လို့သတ်မှတ်
မှာလည်း၊ ရွှေစည်းခုံဘုရားပါ၊ အုတ်စည်းခုံဘုရားမဟုတ်ပါ
ယူနက်စ်စကိုစာရင်းမှာ ပုဂံမပါတာမဟုတ်ပါ၊ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းမပါတာပါ ၊ စာရင်းဝင်အောင်
ကျွန်တော်လည်း အချက်အလက်ခိုင်မာအောင်ရှာပြီး ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ်။
ရွှေစည်းခုုံ ကအခုုမှ ရွှေချထားတယ်လိုု့ မပြောပါ။ ဘယ်တုုန်းကပဲ ရွှေချချ ပုုဂံနဲ့ မလိုုက်ဘူးဆိုုတဲ့ ကိုုယ်ပိုုင်အမြင်ကိုုတော့ ပြောခွင့်ရှိပါတယ်။
အရင်ကသုုံးတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ အခုုသုုံး ပစ္စည်းတွေကွာခြားပုုံရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ မသိလိုု့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အကြံဉာဏ်တောင်း ထားတဲ့ ပိုု့စ်ပဲ စိတ်ရှည်ရှည်သင်ပေးမှပေါ့။
unesco က ပေးချင်လို့ မြန်မာပြည် ပုဂံမှာ လာတိုင်းထွာ စစ်ဆေးရေးများလုပ်နေရာကနေ ငါတကော ကောကြသူများကြောင့် နောက်ဆုံး အလံဖြူပြပြန်သွားတာဆိုတဲ့ အချက်အလက်လေးပါ ရှာလိုက်ပါလားကွာ……
မသကြားလို့ထင်ပါတယ် ……… သကြားလုံးကြော် ဒါ့ပုံကိုလည်း စိတ်ဝင်စားတော့ ယောက်ျားလေးလို့ထင်မိတယ် ……… ခုမှမိန်းကလေးမှန်းသိရတယ် …….. မသကြားလို ပဲ ညီမလည်း ပုဂံကို (၂) ခါပဲရောက်ဖူးတယ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၉ရ တုန်းကတစ်ခါ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကတစ်ခါ ပထမ တစ်ခါတုန်းက အလိုတော်ပြည့်ဘုရားနားမှာရှိတဲ့ ဘုရားတစ်ဆူဆို အပေါ်ထိတက်လို့ရတယ် ၂၀၀၆ သွားတော့မရတော့ဘူးတဲ့ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ညနေစောင်းမှာ လူတစ်ယောက်က အဲဒီဘုရားပေါ်က ခုန်ချသေသွားလို့ ဘုရားကိုအထက်ကိုမတက်ခိုင်းတော့တာတဲ့ ……..
အခိုင်လည်း ပုဂံနယ်မြေက ဘုရားပုထိုးတွေကို ပြုပြင်တာမကြိုက်ဘူး ရှေးဟောင်းအမွေကို မခံစားရတော့ဘူး … တစ်ချို့ကပြောတာကလည်း မပြုပြင်ရင် ပိုပျက်စီးသွားနိုင်တယ်တဲ့ ……. အလိုတော်ပြည့်ဘုရားအတွင်းပိုင်းဆို အဲယားကွန်းတွေနဲ့ ရှေးဟောင်းပုံစံကိုဘယ်လိုမှ ခံစားလို့မရခဲ့ဘူး ကျွန်မကပုံဂံသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရှေးဟောင်းဘုရားတွေသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရှေးခေတ်သမိုင်းကိုခံစားလေ့ရှိတယ် ဥပမာ – အလိုတော်ပြည့်ဘုရားမှာ ရှေးခေတ်ဘုရင်တွေ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့တည်ထားတယ် ဆိုတာလေးကို ဘုရားဖူးရင်ခံစားချင်တယ် …… မနူဟာဘုရားမှာလည်း မနူဟာမင်းကြီးရဲ့ ခံစားချက်ကိုရင်ထဲမှာထားပီး ဘုရားဖူးဖြစ်တယ် ဘုရားကြီးရဲ့ရင်ဘတ်ကြီးက မို့မောက်နေတာကြောင့် ဘုရင်ကြီးရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်ကို ကိုယ်တိုင်ခံစားမိသလိုခံစားရတယ် မနူဟာဘုရားဝင်ဝင်ချင်းရဲ့ ဘက်ဘယ်မှာလည်း ရှေးဟောင်းနန်းတော်အုပ်မြစ်ရှိပါတယ် …….. ညာဘက်မှာတော့ မနူဟာဘုရင်အကျဉ်းချခံရစဉ်က နေခဲ့တဲ့အဆောင်ရှိပါတယ် ……. နောက်မှ သိသလောက်ကို ပြောပါဦးမယ် ……….
စိတ်ဝင်စားစရာ သမိုုင်းလေးတွေ ပြောပြပြီးအားပေးသွားတာကျေးဇူးပါ မခိုုင်ခိုုင်ရေ။
ဟင် ဘုုရားမကြိုက်တဲ့ suicide လုုပ်တဲ့သူကလည်း ဘုုရားပေါ်ကခုုန်ချရတယ်လိုု့ပဲ။
အရင်ကတက်လိုု့ရခဲ့ တဲ့ ဘုုရားတော်တော် များများက အခုုတက်ခွင့်မပေးတော့ဘူး။ ပြိုကျမှာစိုုးရိမ်ရလိုု့တဲ့။ အဲဒါတော့ အမှန်ပဲ။ လူတွေဒီလောက်များလာတာ
ပုဂံ ကဘုရားတွေကို မေဖလားဝါးလဲ ရှေးဟောင်း လက်ရာလေးတွေအတိုင်းပဲထားသင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်
လှည်းဝင်ရိုးသံ တညံညံ ဆိုတာ ပုဂံမှာရှိတဲ့ ဘုရားအရေအတွက်ကို ပြောတာထင်တယ်။ ဘုရားအဆူပေါင်း (4446) ဆူရှိတယ်လို့ ပြောတာကြားဖူးတယ်။
မြန်မာမှန်လျှင် ပုဂံရောက်ဖူးရမယ်တဲ့လေ .. ။
အခုထိတိုင် မရောက်ဖူးသေးတာ ရှက်မိပါတယ် … ။
ပွင့်လင်းရာသီမှာ … အများနည်းတူ .. အားလပ်ရက်လေးလည်း ရချင်မိတယ် … ။
သူများအလုပ်သာ လုပ်ရတယ် .. ခွင့်ခံစားခွင့်ဘာမှ မရှိတာ … သိသိကြီးနဲ့ ခံနေရတဲ့ ဘဝပါလားနော်
စည်းမျဉ်းတွေ ဥပဒေတွေဆိုတာ စာအုပ်ထဲမှာသာ ရှိတယ် .. အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်တဲ့ စာအုပ်ထဲက ခွင့်ခံစားခွင့်တွေ … စက်ရုံတွေမှာ တကယ်မရတာ … လူကြီးတွေ မသိလေလျော့သလား … ။ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလျော့သလားပဲ … ။
သူများအလုပ်သာ လုပ်ရတယ် .. ခွင့်ခံစားခွင့်ဘာမှ မရှိတာ … သိသိကြီးနဲ့ ခံနေရတဲ့ ဘဝပါလားနော် စည်းမျဉ်းတွေ ဥပဒေတွေဆိုတာ စာအုပ်ထဲမှာသာ ရှိတယ် ..
အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်တဲ့ စာအုပ်ထဲက ခွင့်ခံစားခွင့်တွေ … စက်ရုံတွေမှာ တကယ်မရတာ … လူကြီးတွေ မသိလေလျော့သလား … ။ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလျော့သလားပဲ … ။
ဦးမိုက်ရေ …. အခြေနေတစ်ခုကို စောင့်စားနေတာပါ …. ။
တိုင်လို့သာ အမှန်တိုင်း ဖြစ်မယ်ဆိုလျှင် .. တိုင်ပြီးလောက်ပါပြီ … အခုဟာက … ကျောက်ခဲကို ဘဲဥ(ရွာထဲက လူမဟုတ်ပါ) နဲ့ပေါက်သလိုဖြစ်မှာ စိုးလို့ … တကယ်အက်ရှင်ယူမယ့်အဖွဲ့မျိုး ပြောင်းလဲမှသာ ၊ စိတ်ကူးတွေ ထောက်ပြ၊ ချပြခွင့်ရမှာပါ … ။
ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့ … အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနတို့ ၊ လူမှု ဖူလုံရေးတို့နဲ့ … ရလေးရှင်းရှစ်ပ်ကောင်းနေပုံရတယ် ….. ။ ကျွန်မလက်လှမ်းမှီသလောက် စုံစမ်းကြည့်တော့ .. ခွင့်ခံစားခွင့်ဥပဒေဆိုတာ စာအုပ်ထဲမှာပဲ ရှိပြီး စက်ရုံနဲ့ အလုပ်ရုံ ၊ ကုမ္ပဏီအတော်များများမှာတော့ ခံစားခွင့်ပျောက်နေတယ် …. ။ ကိုးကား စာအုပ်လက်ထဲရှိပါတယ် .. အချက်နဲ့ လက်နဲ့ … ထောက်ပြဖို့ …. စိတ်အားတွေလျော့နေတာကြောင့်ပါ ။
ပုဂံဘုရားတွေဖူးခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ပုဂံမြို့ကထွက်တဲ့ယွန်းတို့ပုဂံသူလေးေတွေလည်း တင်ပေးပါအုံးနော် ။။။
ခင်ညား ပြောသွားတာလဲ ဟုတ်သလိုလိုဗျာ
အပေါ်မန့်သွားတဲ့ ပုဂံမှာ ကိုယ်ပိုင်အိမ် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ကြွားသလိုလိုနဲ့ ပြောသွားတဲ့လူကလည်း ဟုတ်သလိုလိုဗျာ
ဆိုတော့ …… မဟုတ်တာကျုပ်ဗျ
ပုဂံ အကြောင်း သိပ်နားမလည်ဘူးရယ်
အချက်အလက် ပြန်ရှာပီးမှ ပြန်လာခဲ့မယ် (လာချင်မှလဲ လာမယ်)
ဇဂါးမစပ် ခုတလော ကင်မလာရူး ရူးနေတယ်ဗျာ
ခုရိုက်ထားတာ နီကွန်နဲ့လား ဟင်… အဲလာလေး ဖြေပေးပါအုံး
အမြှောက်နဲ့ စော်ထားတာပါ။ အစပိုုင်း model တွေထဲမှာဆိုု နိုုက်ကွန် sensor က Color ကောက်တာ ပိုုကောင်းတယ်လိုု့ ပြောကြတာပဲ။
အမြှောက်နဲ့ဆော်ထားတာဆိုမှမှန်မယ်ထင်တယ်။ copy/paste ကိုလည်းသတိမထားမိလိုက်ပါဘူး။
ပုဂံကိုကင်မရာ မကိုင်ခင်က နှစ်ခေါက်ရောက်ဘူးတယ်။
ဘယ်လို မန်း ရမလဲ တောင် မသိတော့ဘူး။….
တကယ် ကို စိတ်မကောင်းစရာပါ…..။
ကျနော်တို့မှာ ရှေးဟောင်းဘုရားတွေ မှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်လွန်းလို့… မြင်းလှည်းဆရာကို အပိုင်ပေါင်းပြီး ရှာခိုင်းရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံးတစ်ခေါက် ပုဂံရောက်တော့ မြင်းလှည်းဆရာလဲ သူရှာထားတဲ့ ရှေးဟောင်း ဘုရားတစ်ဆူကို လိုက်ပို့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့လဲ အလာကောင်းပေမယ့် အခါနှောင်းခဲ့ရတယ်။
ကျနော်တို့ ရောက်တဲ့ အချိန်မှာဘဲ ဘုရားကို ပြင်နေကြပြီလေ။
မြန်မာလူမျိုးများကလဲ ဘုရားတကာ ဖြစ်ချင်ကြတာကိုး။။။ ပြင်ကြမှာပေါ့….. ဒီလိုပြောတော့ သူများကုသိုလ်ရေးကို ထိခိုက် သလိုလို ဖြစ်သွားမလား…..
င်္်Fried Candy ချိုချဉ်ကြော်လေးရေ
ရှေးဟောင်းအမွေပုဂံပေါ်ထားတဲ့ စေတနာနဲ့ ပုံလှလှလေးတွေ အတွက် လက်မထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ကျမကတော့ ပုဂံမရောက်တာ အနှစ် ၂၅ ကျော်ပြီဆိုတော့ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာ သူများအပြောနဲ့ ဝေဖန်နေရပါတယ်။
မယ်ပု Pooch ရေးတဲ့ ရာဇဝင်ထဲကမြို့တော် တုံးကလည်း ဒီ UNESCO မဝင်တဲ့ အကြောင်းတွေဖတ်လိုက်ရတော့ တော်တော် နှမျောမိပါရဲ့။
တော်သေးတာပေါ့ ဘုရားပြင်ဖို့အလှူခံတာ မလှူခဲ့မိလို့။
ကားဝင်ရိုးသံတညံညံ ထဲက ကားတန်းကြီးကိုကြည့်ရင်း ရန်ကုန်လို traffic jam ဖြစ်နေတာလားလို့ စိုးရိမ်မိပါတယ်။
ကြုံတုံးလေး ဆရာဝင်လုပ်ရရင် category မှာ copy&paste ဆိုရင် သဂျီးက ပိုက်ပိုက်မပေးပါဘူးတဲ့။ photography ဆိုရင် ပုံမှန် post ထက် point ပိုရတယ်လို့ ဆရာ့ဆရာကြီးတွေထံမှ ကြားဖူးပါကြောင်း။(သဂျီးပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှနှိုက်ယူနည်းလေးပါ)
မနေ့က ပိုု့စ်လုုပ်ပြီး မှ copy/paste အောက်ရောက်နေမှန်း သိတော့ ပြင်လိုု့မရတော့ဘူး
copy/paste ကိုု သူများသတိမထားမိပါစေနဲ့လိုု့ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ဆုုတောင်းနေတုုန်း
ပုဂံ ကိုတော့7ခေါက် 8 ခေါက်ရောက်လဲ
နှစ်စဉ် ခရီးသွားချိန် စာရင်းတို့ရင် ပါစမြဲပါဘဲ…
ဟိုးအရင် အိမ်ကြို အိမ်ကြားတွေမှာ
ဘုရားဖူးရတာထက် ခုလိုရှင်းရှင်း လေး (Hotel တွေမပါ)
တစ်ခေါက်နဲ့ တစ်ခေါက် အသစ်တွေဖြစ်လိုက်
ဟောင်းသွားလိုက် ပြန်သစ်လိုက်နဲ့ …
ပုဂံကို ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်စာရင်းသွင်းပြီး ထိန်းသိမ်းဖို့ ယူနက်စကို က လေ့လာနေပြီ လို့ ယခုတစ်ပတ်ထုတ် ဂျာနယ်တွေမှာပါပါတယ်။ ဝမ်းသာစရာပါ။